कृषिका लागि उर्वर झापा जिल्ला यो वर्षदेखि तोरीमा आत्मनिर्भर बन्ने कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । तोरी खेतीतर्फ निजी तथा सहकारी खेतीको आकर्षण बढेसँगै उत्पादन बढ्ने भएकाले यो वर्षदेखि झापा आत्मनिर्भर बन्ने कृषि ज्ञान केन्द्रका प्राविधिक शेषराज पौडेल बताउछन् ।
प्राकृतिक एवं विषादीरहित उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले चौथो प्राङ्गारिक कृषि मेला आयोजना गरिने भएको छ । माघ १७ देखि २० गतेसम्म पाटन संग्रहालय क्षेत्रमा मेला आयोजना गरिने बताइएको छ । करिब ५० कक्ष रहने मेलामा दुई सयभन्दा धेरै प्राङ्गारिक उत्पादन
कृषि र पशुपालनबाट समृद्धिको आधार तय गर्न सकिने सन्धिखर्क नगरपालिका नगर उपप्रमुख ठाकुर कुमार विकले बताएका छन् । जालकाँडा बाख्रापालन कृषक समूहले वडा न ११ डिर्भनामा आयोजना गरेको मिसनलाई सम्मान तथा विदाइ कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै विकले
२०७६ माघ ३
पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभाका सदस्य टोप बहादुर रायमाझीले आर्थिक समृद्धिको आधार कृषि र पशुपालन भएकोले कृषिको बजारीकरण र औद्योगीकरणमा लाग्नुपर्ने बताएका छन् । बुधबार सन्धिखर्कको त्रिवेणीधाममा अर्घाखाँची उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको
ललितपुरको कुपण्डोलमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था बिग मर्जरमा जाने भएको छ । गत शनिबार सम्पन्न संस्थाको २२औं साधारणसभाले बिग मर्जरमा जाने निर्णय पारित गरेको हो । मर्जरमा जाने संस्थाहरूबीच छलफल चलिरहेको र छिट्टै
अलैंची किसान चिन्तित
अलैँची उत्पादनमा गिरावट आएसँगैै सोलुखुम्बुको लिखुपिके क्षेत्रका कृषक चिन्तित बनेका छन् । अलैँचीको पकेट क्षेत्र मानिने लिखुपिकेमा केही वर्षयता रोग तथा कीराका कारण अलैंची उत्पादनमा निरन्तर गिरावट आएसँगै कृषक चिन्तित बनेका हुन् । करिब ४ वर्षयता भाउ
यस जनक पशुपति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को १९औं बार्षिक साधारण सभा पौष २६ गते शनिवार वैभव पाटी प्यालेस मैतिदेवीमा संचालक समितिका अध्यक्ष मोहन कुमार चालिसेको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो ।यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्व न्याधिश श्री राजेन्द्र प्रसाद
मनेश्वरी सहकारीको अध्यक्षमा महर्जन
मनेश्वरी वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को नवौँ वार्षिक साधारणसभाले नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । साधारणसभाले संस्थाको अध्यक्षमा नरेन्द्र महर्जनलाई निर्विरोध निर्वाचित गरेको हो । त्यस्तै संस्थाको उपाध्यक्षमा सुनिल खड्गी, सचिवमा चन्द्रलाल श्रेष्ठ र कोषाध्यक्षमा गणेशप्रसाद
तपाईं हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारीको अध्यक्षमा पुनः थापा
तपाईं हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको अध्यक्षमा पुनः मनोजकुमार थापा मगर निर्वाचित भएका छन् । शनिबार सम्पन्न संस्थाको १२औं वार्षिक साधारणसभाले मनोजकुमार थापा मगरको नेतृत्वमा सर्वसम्मत नयाँ नेतृत्व चयन गरेको हो । नवनिर्वाचित सञ्चालक समितिको
सिङ्गो गाउँ नै किबी खेतीमा
कालिञ्चोक गाउँपालिकाको एक वडालाई किबी पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । उच्च भेगमा रहेको कालिञ्चोक गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का किसानले गाउलाई किबी पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न भन्दै सामूहिक किबी खेती सुरु गरेका छन् । दुई सय १४ हेक्टरमा फैलिएको जमिनमा करिब ४० हजार किबीको बिरुवा रोपिएको छ ।
नेचुरल सहकारीको क्यूआर कोड बैकिङ सेवा
२०७६ पौष २५
काठमाडौँको जोरपाटीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको नेचुरल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले क्यूआर कोड पेमेन्ट सिस्टम सुरु गरेको छ । सदस्यलाई छिटो, सरल, विश्वसनीय, उच्चस्तरीय सेवा दिने प्रतिबद्धताअनुसार क्यूआर कोड बैकिङ सुरुवात गरेको हो । संस्थाले यसअघि
कृषि प्राविधिकहरू किसानसँगै व्यस्त
‘सुशील सर ! मेरो गाई बिरामी भयो’ अपरिचित मान्छेको फोन आएपछि गल्याङ नगरपालिका पशु शाखा प्रमुख सुशील अर्यालले प्रश्न गरे, ‘कुन ठाउँबाट को बोल्नुभयो ? गाइलाई के भएको थियो ? कहिलेदेखि ? हुन्छ, आधा घण्टामा हामी त्यहीँ आइपुग्छौँ ।’ गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर एक मालुङ्गाबाट फोन आएको रहेछ ।
लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिका–१ जिता देउरालीमा रहेको चिनारी कृषि फार्ममा विद्युत् सर्ट भएर आगलागी हुँदा डेढ करोडभन्दा बढीको क्षति भएको छ । फार्ममा रहेको ५० बाख्रा र एक सय लोकल कुखुरा जलेर नष्ट भएको छ । मंगलबार साँझ पौने ७ बजे अचानक विद्युत् सर्ट
किबी महोत्सवमा सुन्तला व्यापारी सम्मानित
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गर्दै सुरु भएको सातदिने किबी महोत्सव सम्पन्न भएको छ । सात दिनसम्म चलेको महोत्सव विभिन्न कृषकहरुलाई सम्मान गर्दै मंगलबार सकिएको हो । महोत्सवमा किबी कृषकभन्दा अन्य कृषकहरुलाई सम्मान गरिएकोमा किबी कृषकहरुले भने दुखेसो पोखेका छन् । महोत्सव आयोजना समितिले किबी कृषक भनेर सुन्तला कृषकलाई सम्मान गरेको भिमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर ६ कि मोतिमया तामाङले बताइन् ।
विदेशमा बस्नेलाई थाहा हुन्छ मातृभूमिको माया कति हुन्छ
रामहरी शर्मा पौडेल एक युवा कृषक हुन् । तिलोत्तमा–१४, रुपन्देहीमा गाईफर्म खोलेर दुग्ध उत्पादन क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका पौडेल युवा शक्तिको कृषिमा हुने झुकावले नै समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार सृजना हुनसक्ने धारणा राख्दछन् । २०३९ सालमा स्याङ्जामा जन्मिएका पौडेल एक मनकारी तथा सामाजिक क्षेत्रको विकास गर्न चाहने युवाको रुपमा चिनिन्छन् । आफ्नै गाईफर्म र गौतमबुद्ध डेरी तथा चिस्यान केन्द्रको व्यवस्थापक पद सम्हालेका पौडेलको गौतमबुद्ध
पाँचथरमा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष ३०० मेट्रिक टन बढी सुन्तला उत्पादन भएको छ । गत वर्ष सात हजार ३७५ मेट्रिक टन उत्पादन भएकोमा यस वर्ष सात हजार ६७५ मेट्रिक टन उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सागर विष्टले बताए । यस वर्ष सुन्तला उत्पादन हुने क्षेत्रफल बढेको छ ।
सहकारी संघ बाँकेको निक्षेप २ करोड ७९ लाख
बाँके क्षेत्र नं. ३ ‘क’ प्रदेशसभा सदस्य इन्द्र प्रसाद (आईपी) खरेलले राजनीतिक परिवर्तन भएसँगै जनताको आर्थिकस्तरमा परिवर्तन ल्याउनका लागि सहकारीहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताएका छन् । जिल्ला सहकारी संघ बाँकेले शुक्रबार आयोजना गरेको आफ्नो २८औं वार्षिक
महिलाको सहकारी : नौ वर्षमा पन्ध्र हजारबाट २५ लाखको शेयर पूँजी
२०७६ पौष १९
नेपाल सरकारले खाद्य संस्थानमार्फत किसानहरूसँग धान खरीद गर्ने प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ । खाद्य संस्थानले नितान्त कृषकहरूको धान खरीद गर्नुपर्ने नियम छ तर किसानहरूलाई पाखा लगाई संस्थानले व्यापारीसँग धान खरीद गरिरहेको छ ।
कृषिको समस्या नसुल्झिए मुलुक विकसित हुँदैन : कृषिमन्त्री भुसाल
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले कृषि जटिल विषय भएकोले कृषिको समस्या नसुल्झीकन मुलुक विकसित नहुने भन्दै विकास गर्न सम्भव समेत रहेको बताएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको ‘नेपालमा कृषि क्षेत्रका व्यवसायीकरणमा निजी